छापामार कमरेड संरचना, शिक्षिका रचना बनेपछि । » Grand News
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार २१:०१ 130 पटक हेरिएको
– जनक्रान्तिको लहर चलेको बेला । जाली फटाहाको संसार जलेको बेला । राजतन्त्र गलेको बेला । क्रान्तिको भरभराउँदो आगो बलेको बेला । हृदयमा छुट्टै खालको बिछट्टै आनन्द थियो । सामुहिकतामा रमाउँदै गाउँ-बस्ती, हिमाल-पहाड-तराई, दून र खोंचहरू । टारी र टारहरू । भित्री मधेस र चूरेहरू । गाउँहरू, शहरहरू । जनक्रान्तिको विगुल बजेको बेला । छातिमा जनवादको सपना सजिएको बेला । विभिन्न गोल-भूगोलहरूको लम्बाइ नाप्न पाईयो । शोषित-पीडित जनमनहरूको न्यानो स्नेहमा बेरिन पाईयो । र हजारौं लाखौं सहयोद्धाहरूसँग पनि भेटघाट र भलाकुसारी गर्न पाईयो । धेरै कमरेडहरूले देश र जनताको लागि जिवनोत्सर्ग गरे । कैयौं बेपत्ता भए । कैयौं घाइते र अंगभंग भए । तर “काम गर्ने कालू , मकै खाने भालु ” झैं हुन पुग्यो । विडम्बना व्यवस्था त फेरि मुट्ठीभर मान्छेको लागि मात्र फेरियो । जनक्रान्तिमा होमिएका योद्धाहरू सार्‍है बिचल्ली भए । कोही खाडीमा, कोही गाडीमा त कोही झाडीमा रुमल्लीए । हिंड्दा हिंड्दैको बाटो हराए । तर पनि केही कमरेडहरू अदम्य साहस बोकेर हिम्मत नहारी आफ्नो कर्ममा जुटिरहे र सफलता पनि प्राप्त गर्दै गए । सफलताको सिंढी पनि चढ्दै गए । जस्तै : अनमिनले अयोग्यको बिल्ला भिराएको कमरेड मीरा राईले अल्ट्रा धावकको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितिन । कोही सांसद, कोही मन्त्री भए । कोही गाउँका गन्यमान्य भए । यस्ता उदाहरणहरू कैयौं छन । विस्तारै प्रकाशमा आउँछ नै । यही पेरिफेरिमा रहेर मैले यहाँ एक जना साहसी कमरेडको मिहिनेत र सफलताको कथा उजागर गर्न गईरहेको छु ।
यसरी देश र जनताको लागि मृत्यु या मुक्तिको शपथ खाएर हिंडेकी छापामार क. संरचना शिक्षिका रचनामा बदलिएपछि सुन्दर र समुन्नत : समाज निर्माणको काम बिना गतिरोध अगाडि बढीरहोस । सहयोद्धा र हिंजोको उनको एक सानो कमान्डरको तर्फबाट लाख लाख शुभकामना !
डम्बर थामी ‘अनुपम’:१२ चैत्र २०७७, पराईभूमी !
उज्यालो नेटवर्क डटकमका दुई
वायु प्रदूषण बढेका कारण
काभ्रेको सिसाखानि आसपास ४.१
समाजसेवी सुनितामाया गुरुङको जग्गादानबाट